प्रभु लाइफकाे आइपीओले ताेड्याे सबै रेकर्ड,कति पर्याे आवेदन ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyप्रभु लाइफकाे आइपीओले ताेड्याे सबै रेकर्ड,कति पर्याे आवेदन ?
प्रभु लाइफकाे आइपीओले ताेड्याे सबै रेकर्ड,कति पर्याे आवेदन ?
प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको आइपीओमा १० लाख ४४ हजार ५२५ जना लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार अन्तिम दिन बिहीबार साँझ ४ः३० बजेसम्म २ अर्ब ७७ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । याे आजसम्मकै सबैभन्दा धेरै आवेदन हाे ।
कुल २ करोड ७७ लाख ९४ हजार ७३० कित्ताका लागि आवेदन परेको हो । यो सर्वसाधारको लागि बिक्री खुला गरिएको कुल ५४ लाख कित्तालाई आधार मान्दा माग भन्दा ५.१५ गुणा बढी आवेदन हो । प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको मंसिर २९ गतेदेखि बिहीबार (पुस २ गते) सम्म आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरमा ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कुल ६० लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको हो । यसमध्ये ३ लाख कित्ता कर्मचारी र ३ लाख कित्ता म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याइएको छ ।
बाँकी ५४ लाख कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गरेको छ । प्रभुलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले ‘इक्राएनपी–आइआर बीबी प्लस’ रेटिङ दिएको छ । यस रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको देखाउँछ ।
हाल प्रभुको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आइपीओ बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । बिमा समितिको प्रावधान अनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्दछ ।
Previous articleनेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी, कुन पदमा कति ? हेर्नुहोस्
Next articleशुक्रबार(आज) फेरी बढ्यो सुनको भाउ